Taariikhda My Butros » Top 6 Sababaha Maxaad Karinta waa Hot u Romance
Last updated: Sep. 17 2020 | 2 min akhri
"Habka ay u Nin qalbigiisa waa uu caloosha iyada oo loo marayo."
Sida foodie is-qirashadeeda ah, Waxaan xusayaa kara sababo badan oo, laakiin halkan waa hogaanka 6 Sababaha lagu karsado waa "kulul,"Gaar ahaan shukaansi iyo weheshiga goobta maanta.
1. Karinta bixisaa "dhexkariska" fiican ee romantic-.
Sida inta badan dumarka, Waxaan jeclahay in wined iyo quraacdeen ee makhaayadaha, malana waxba by kooxaha lab oo qayb ka ah geeddi-socodka waa weynka ah. Laakiin, sida xiriirka xuubsiiban, waxaa wax aad u "saaxiib" oo ku saabsan cuntada guriga la kariyay la wadaago ee gaarka ah ee ka mid ah guriga— la Candlelight, yar music ah, qoob ka ciyaarka iyo awood u leh inay dejiyeen timahaaga sida xaaladda dhigaya. Qof fraiche Darwiish?
2. Karinta guriga inta badan waa ka caafimaad badan makhaayad cunista.
Marka cunto ka soo cuneysid, marar badan cuntooyinka la warshadeeyey, adeegay la suugo hodan iyo naaxinta, shiilay ee baruurta xad-dhaaf ah, "Super xajmi" oo aan diyaarinta habboon ee kuwa leh xaddidaadda cuntooyinka iyo xasaasiyad cunto. Cuntada waxaa ka soo noqon kartaa qaali siyaabo badan hal.
3. Xirfadaha kariska ku daro dumar ah ama nin ee resume taataabtay.
Ka fikir waxa ka mid ah sida kordhinta tirada "Blue Book" qiimaha suuqa shukaansi ah.
Halkan waxa qoraa lab dhawaan qoray: "Tirada dumarka maalmahan in si furan u galin aanay kariyo karaa waa yaab. Marka haweenay lagu sheegay in aanay iyadu kariyo karaa, fikiri ugu horeysay ee ka timaada in badan oo ku Kasaan ama dadka wanaagsan ee waa "Sidee jahannamada baad is ogow naftaada iyo sida aad u awoodaan in ay is ogow of ii noqon lahaa?"
4. Karinta kuu ogolaanayaa inaad noqon dheeraad ah oo madax-bannaan oo dheeraad ah oo ay ogaadeen sida naag.
No more sugaya hooyadeed si aad u hagaajin cuntada aad jeceshahay, ama rajeynaya in makhaayad xaafadda aad ku yeelan doonto maalinta Isniinta ee menu, ama garaacaya u qaato baxay; aad wax uga qaban kartid naftaada!
5. Karinta sasabtaa Keligeygaan.
Laga soo bilaabo jaararkoodii ay u wacan, qaabooyin il-racfaan on waslad khafiif ah oo ku, in midabo kala duwan oo iyo qaabab, dhadhanka jannada— cunto fiican raali galin lahayd kuwa aan daryeelo heerar aad u badan.
6. Karinta waa dariiq madadaalo in ay ku xidhmaan.
Waxaad kariyo karaa oo uu ka dhigi kartaa salad. Feed midba midka kale, ama laga yaabee in sheekooyinka iyo dhaqanka wadaag la xiriira cuntada qoyska. Karinta ka dhigaysa nin dareemaan pampered iyo aqoon saday in. Oo haddii uu gaar ah si aad u, ma aha in sida aad u jeclaan lahaa inuu dareemi?
Markaasaa waxaa war fiican ay halkan: Ma aha in aad si aad u codsato dugsiga loogu badali lahaa ama naftaada hoos maxkamad aan dhamaadka lahayn iyo baadi; waxaa jira goobo badan oo wax lagu karsado online in ay bixiyaan tallaabo-tallaabo Casharrada aad u kordhiso IQ karinta!
Istiraatiijiyad kale oo waxtar leh waa in ay iibsadaan cunto kariska qoray carruurta. Waxay bixiyaan bartii laga bilaabi weyn ee barashada ku saabsan ammaanka jikada, cabbiraadda heerka, oo si fudud loo cuntada.
Xusuusnow, karsado waa hab fiican oo in la tixgeliyo "kulul" oo racfaan hunguri ninka maanta!